स्वयम्भूनाथमा सरस्वती पूजा (फोटोफिचर)
काठमाडौँ। आज बसन्त पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाईदैछ। यसै अवसरमा सोमबार देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। आजकै दिन विद्यालय नपठाएका साना बालबालिकाहरुलाई अक्षराम्भ गराउने चलन छ। सरस्वतीको पूजाको दिन अक्षराम्भ गरिए विद्या आउने विश्वास…
नाचघरमा केलाङ र धाननाच गुञ्जिएपछि...(फोटोफिचर)
काठमाडौं। राष्ट्रिय नाचघरको प्रेक्षालय बिहीबार ठ्याक्कै पुर्वेली गाउँघर र रहन-सहन झल्कियो। खरले छाएको सुन्दर घरले स्टेजको पृष्ठभूमि पूर्वी पहाडी गाउँघरको स्मरण गरायो भने केलाङ र धाननाचले लिम्बू समुदायको संस्कृति झल्काएको थियो । स्टेजमा एक हुल केलाङ ग्रुप (च्याब्रुङ नाच समूह) छिर्दा…
भृकुटीमण्डपमा सोनाम ल्होछारको रौनक (८ तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । तामाङ समुदायले नयाँ वर्ष २८५४ औं सोनाम ल्होछार बिहीबार बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन् । ल्होछारको अवसरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । भृकुटीमण्डपमा देखिएको दृश्यलाई यि ८ तस्बिरमा हेर्नुहोस् । -तस्बिरहरु : आर्यन धिमाल
राजधानीमा यसरी मनाईयो सोनाम ल्होछार (फोटो फिचर)
काठमाडौं । तामाङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी बिहीबार नयाँ वर्ष २८५४ औं सोनाम ल्होछार मनाएका छन् । ’ल्होछार’ शब्द ’ल्हो’ अर्थात् वर्ष वा साल र ’छार’ वा ’सार’ अर्थात नयाँ भन्ने दुई शब्द मिलेर बनेको छ । तामाङ समूदायले विशेष…
उपत्यकामा माघी रौनक (फोटोफिचर)
काठमाडौँ। आज माघ १ गते अर्थात माघे संक्रान्ति। उपत्यका लगायत देशभर यस पर्वलाई धुमधामका साथ मनाइएको छ। माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी आदि नामले चिनिने नेपालको एक प्रमुख चाड हो। यसैक्रममा उपत्यकामा बसोबास गर्ने थारु समुदायले टुँडिखेल र मगर समुदायले…
१० फोटो र भिडियोमा हेर्नुहोस् लमजुङको बेसीसहरमा ल्होसार उत्सवको उल्लास
लमजुङ। ल्होसार पर्वको अवसरमा लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरमा भव्य उत्सव चलिरहेको छ । लिःल फङ (घले समाज) ले यो महोत्सव आयोजना गरेको हो । च्य ल्हो (चरा वर्ष) सकिएर खि–ल्हो (कुकुर वर्ष) को शुभारम्भलाई नयाँ बर्ष मानिन्छ। यही नयाँ बर्ष स्वागतका…
काठमाडौं। भोलि माघे संक्रान्ति। तरुल, घिउ र चाकुको पर्व। संक्रान्तिको अघिल्लो दिन तरुलको व्यापार निकै बढेको छ। देशैभरका व्यापारीहरुलाई तरुल बेच्न भ्याइनभ्याइ छ। माघ महिनामा तरुल खानुपर्ने मान्यता र तरुल फल्ने सिजनसमेत भएकाले तरुलको व्यापार निकै बढेको व्यापारीहरु बताउँछन्। काठमाडौंको…
काठमाडौं। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले काठमाडौँमा बृहत र्‍याली आयोजना गरेको छ। 'वेरोजगार वर्गको मुक्तिका लागी आजको आवश्यकता राष्ट्रवादीको हातमा सत्ता' भन्ने मूल नाराका साथ उक्त र्‍यालीको आयोजना गरिएको हो। भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर बसन्तपुरमा टुङ्गिएको र्‍यालीमा मानिसहरु राष्ट्रिय झन्डासहित सहभागी थिए। र्‍यालीमा सहभागीहरुले…
डा. केसीले अनसन तोडदा जे देखियो (फोटोफिचर)
आर्यन धिमाल काठमाडौँ । छ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आज अनसन तोडेका छन्। टिचिङ अस्पतालको गेट नजिकै जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएका मजदुर अथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले अनसन तोडेका…
नयाँ दिल्ली । राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको सर्वाधिक व्यस्त विमानस्थल हो। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नाममा बनेको यो देशकै सबैभन्दा उच्च क्षमताको विमानस्थल हो। भारतकै अर्को ठूलो सहर मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो…